Isu tinoongorora Facetune, gadzirisa yako selfies nyore uye nekukurumidza | IPhone nhau
Isu tiri pakati peiyo «selfie era», zvinoita sekunge isu tinenge tine hanya zvakanyanya nezvemberi kamera yemafoni foni yedu pane iyo yatinowana kumashure. Kamera iyo yakatanga kugadzirirwa vhidhiyo yekufona, yakaguma yave chimwe chezvinhu zvinonyanya kushandiswa nevadiki nevakuru kutenderera pasirese pane avo mafoni. Nekudaro, mazhinji emakamera aya ane kushomeka kwemhando yepamusoro, uye kunyangwe dai vasina, isu tese tinoda kutaridzika kutaridzika mune yedu selfies. Dzikama, izvo zvinotarisira Facetune, iyo inonyanya kufarirwa selfie yekugadzirisa app yemusika iyo inotibatsira kuti titorezve uye nekuvandudza yedu yedu kuitira kuti tigare tichiratidzika kunge takakwana.
Ngatitarisei zvakanaka Facetune, iyi yakakurumbira selfie uye portrait yekugadzirisa app iyo yave iri App Store mutungamiri mune dzinopfuura 127 nyika dzakasiyana, izvo zvinopupurira kunaka kweapp. Kunyangwe iri "shiri isingawanzoitika" munyika yezvikumbiro, nekuti chikumbiro chakabhadharwa chinoda kusvika € 4, chimwe chinhu chisingawanzo kuwanikwa mumusika uno nhasi, uko anenge munhu wese anotsvaga iyo "freemium 'uye yakasanganiswa kubhadhara. Tiri kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezveFetetune, kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa ako mapikicha-mapikicha nenzira iri nyore.
Nhasi, chero chero mushandisi anotora mukana wakazara kugona kwemafoni nhare kugadzirisa zvishoma mumazhinji mafoto atinotora, uye hazvigone kuve zvishoma muma selfies, kunyanya pakureba kwekubwinya kwe Instagram, iyo social network yakavakirwa pane kutora mafoto uye kwatingawana mamwe maselfie pamasendimita pane rese network. Facetune inokutendera iwe kuti uwane mibairo mikuru kubva mukugadzirisa foto pasina kudiwa kwezivo yakakura kana inorema desktop yekugadzirisa maturusi.
1 Chii chatinogona kubata kumusoro neFetetune?
2 Kukohwa kubudirira kwese kwaunoenda
3 Akanyatsonaka pakugadzirisa mifananidzo yedu?
4 Nhoroondo dzekushandisa
Chii chatinogona kubata kumusoro neFetetune?
Facetune ine akateedzana ezvikamu zvakatsaurwa kune ese maficha echiso chedu, nenzira iyi maturusi akatarisana zvinoenderana nerinotevera runyorwa:
Smile: Iwe unozogona kusimbisa kunyemwerera kwako, kuwedzeredza kana kuinatsa, pamusoro pekupa mazino ako kupenya kwechisikigo uye kuchena.
Ganda: Inopfava nekumutsiridza ganda rako, kubvisa kusakwana kwenguva pfupi semapundu nemapundu, kuwedzera pakujeka kwerima denderedzwa nekuvandudza matauriro eganda redu reganda.
Eyes: Unogona kusimbisa maziso ako kuti uwane kutaridzika kwakanyanya kupinda mukati, shandura ruvara rwemeso edu uye kunyange kubvisa zvinorema "ziso dzvuku" kubva pamifananidzo.
Pelo: Tinogona kuvandudza matauriro ebvudzi redu, uyezve nekuwedzera vhudzi rakanyanya uye riri nani.
Kugadzirisazve chiso: Natsa kumeso kwako mitsara, kusimudza matama uye tsiye, pamusoro pekushandura kumeso kwako nenzira inonakidza kuita yemutorwa, pakati pemamwe mabasa.
cheno: Isa chero mumvuri weziso, wedzera vhoriyamu kune ako eyelashes uye tsiye pamwe nekuwedzera kusimba kwemuvara wemiromo yedu.
Kusimudzirwa mifananidzo: Sharpen, gadziridza mwenje, wedzera mhedzisiro, gadzira mafirita uye wedzera mafuremu ndeimwe yemamwe mikana yakawanda yeFetetune
Kukohwa kubudirira kwese kwaunoenda
Tinogona kutaura kuti kubatsira kwayo uye kubudirira kuri kuzviisa pasi, asi mune izvi zvinoita sekunge kwete, mu Gizmodo yakaziviswa pane imwe chiitiko seapp yevhiki, zvakadaro, mu The New York Times Ivo vakarumbidzawo mukana weichi chikumbiro, izvi zvakati Roy Furchgott:
Facetune inobatsira iwe uine yako yepamusoro Hollywood kutaridzika, kunyangwe nemapikicha akatorwa kubva mbozhanhare.
Midhiya yakakosha kutenderera pasirese yakanangana neiyo nharaunda yeIOS, vakomana ve iMore vakatozivisa kuti vanofara nekushanda kwe Facetune, uye kubvira ipapo Huffington Post Vakazvizivisa seimwe yeanonyanya kushandisa mafoni pamusika. Nekudaro, aya ndiwo maratidziro anoita timu yeLightricks kwauri:
Mufananidzo wega wega waigona kushandisa retouch. Ichi chikonzero nei magazini achishandisa Photoshop kuita kuti vanhu vataridzike zvakanyanya. Kusvika nhasi, iyo yakasara yepasi rose yaifanira kugadzirisa zvishoma. Asi kwete zvekare. Facetune inopa maturusi ane simba, akambochengeterwa nyanzvi, kuita kuti pikicha yega yega iite seyakanaka. Iye zvino unogona kuve nechokwadi chekuti mifananidzo yako yese ichatarisa nenzira yaunoda. Munyika iri kuwedzera kutaridzika, kugadzirisa mapikicha ako usati waagovana iwo pamhepo zvakangofanana nekusanganisa bvudzi rako uye kukwesha mazino ako.
Muchidimbu, iko kushanda Yakaunganidza chiyero chepakati chenyeredzi 4,5s, zvese mushanduro yepasirese uye mukuvandudzwa kwazvino, chimwe chinhu chakaringana kufunga mumusika wekushandisa sekuda seicho cheiyo App yeApp. Kune rimwe divi, inogara ichiripo pakati pekubudirira kwezvikwereti zvakabhadharwa. Izvo ndezvese izvi izvo timu yeApp Store haina kuzeza kuisanganisira pakati pechinyorwa chekushandisa «zvakakosha»Kubva kuApp Store.
Akanyatsonaka pakugadzirisa mifananidzo yedu?
Ichokwadi chikumbiro icho chinodzidziswa neicho uye chayo. Ichokwadi kuti zvinogona kutaridzika kunge zvekunyepedzera uye zvepamusoro kuronga mapikicha edu zvakanyanya, asi izvo zvatova mukuravira kwemunhu wese, nekuti Facetune ichatibvumidza kubvisa chete mburwa, kana kutobata chero kutsauka kwemhino dzedu. Saka kuti iwe ugone kuwana zano rekugona kweFetetune, isu takusiira iwe pamusoro pemitsara chero vhidhiyo kubva yavo YouTube chiteshi kuti iwe ugone kuona mufananidzo wekugadzirisa chikamu kurarama kuburikidza neFetetune. Kuburikidza nemasaini akareruka ane runyorwa rwezvakanyorwa zvakaringana maturusi, tinogona kupa chitarisiko chedu chinoshamisa kubata-kumusoro.
Facetune chikumbiro icho yakavhurwa paApple App Store muna Chikunguru wegore rapfuura, uye munguva pfupi yakadaro yatove imwe yeanonyanya kufarira uye kurodha pasi. Inotora 49,6MB chete uye inoshandurwa mumitauro yakati wandei seSpanish, ChiGerman, Chinese, Korean, French, English, Italian, Japanese, Portuguese, Russian and Turkish. Ichokwadi ndechekuti timu yeLightricks yasarudza yemaitiro asina kujairika ekutengesa nhasi, nekuti iko kunyorera kunodhura € 3,99 semubhadharo wenguva imwe, chimwe chinhu chiri kuwedzera kuoma kuona, asi vekare vashandisi veIOS vanofara kuona zvakare.
Iko kushandiswa kunoenderana ne chero mudziyo une iOS 7 yakaiswa kana imwe vhezheni, kuti tikwanise kuitora pane iyo iPhone 4. Zviripachena, isu takatarisana neshandiso yepasirese, ndiko kuti, kuitora kubva ku iPhone tichava nayo pane chero chinhu cheIOS, ingave iri iPad kana iPod Bata. Nekudaro, kana iwe uri kufunga nezve kutsvaga yakasimba selfie yekugadzirisa chishandiso, asi iyo isina kunetsa kushandisa, Facetune ndiyo yako yakanaka imwe sarudzo. Kana iri mutungamiri mune runyorwa rwezvakabhadharwa zvikumbiro muApp Store kutenderera pasirese, chinofanirwa kunge chiri chechimwe chinhu, saka isu takamanikidzwa kugovana newe chiitiko cheFetetune, chakavanzika chakachengetedzwa kwazvo chenyeredzi dzese dze Instagram.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Isu tinoongorora Facetune, tinogadzirisa yako weti nyore uye nekukurumidza
Zvakawanda Nhema kupfuura Brexit akadaro
Nguva dzese pandinoona pikicha yeavo venhema, nechiso chakatsetseka, ini ndinogwina.
Kupindura Zvakawanda Nhema kupfuura Brexit
TextEdit yakaonekwa mune demo reIOS 10 kuWWDC yekupedzisira